‘राधा सँग मोहन’ को काठमाडौंमा विशेष शो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘राधा सँग मोहन’ को काठमाडौंमा विशेष शो
काठमाडौं। मैथिली भाषामा निर्माण भएको चलचित्र ‘राधा सँग मोहन’ को काठमाडौंमा एक विशेष शो प्रदर्शन गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव अतिथि खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री महेन्द्र यादव र सङीतकार तथा गायक सन्तोष राज उपस्थित भएका थिए। विशेष शो पश्चात् मन्त्री देवले प्रतिक्रिया दिँदै मैथिली भाषाका चलचित्रहरुको उत्थान तथा विकासका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले मैथिली चलचित्र काठमाडौंमा प्रदर्शन हुनु गर्वको विषय भएको बताए। यस्तै, अर्का मन्त्री यादवले मैथिली भाषाप्रति आफ्नो बढी झुकाव भएकोले यो सराहनीय कार्य भएको बताए। उनले मैथिली भाषाका चलचित्रले मैथिली संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने बताए। जमल नाचघरमा प्रदर्शन गरिएको विशेष शोमा करिब ८० जनाको उपस्थिति भएको जनाइएको छ। सो कार्यक्रममा कलाकार, समाजसेवी तथा पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।
चललिचत्रमा कथा–गीत डिपी शास्त्री, गायक उदितनारायण झा, दीपा झालगायत रहेको जनाइएको छ। चलचित्रको निर्माता दिपेन्द्र देव, निदेर्शक धर्मेन्द्र धर्मात्मा रहेका छन्। कलाकारहरु अमरेश सिंह, वीरेन्द्र गुवा, डीपी शास्त्री, दीपेन्द्र देव लगायत रहेका छन्।
सो कार्यक्रममा कलाकर्मी योगेन्द्र देव,सन्तोष राज, कमल मण्डल, ममता देव, इन्द्रदेव मण्डल, परशुराम चौधरी लगायतले चलचित्रको सफलताको कामना गरेका थिए। सो चलचित्र फाल्गुण महिनामा हलहरुमा प्रदर्शन ल्याउने तयारीमा रहेको निर्माण समूहले जनाएको छ।